भरतपुरमा मतगणना एक लाख पुग्न लाग्दा ८७५६ मतले रेणुको अग्रता « गोर्खाली खबर डटकम
हेर्नुहोस असार १५ गते बुधबार जुन २९ तारीखको राशिफल, जय श्रीपलान्चोक भगवती !
दुई वर्षमा ६ जनासंग बिहे, अन्तिममा सबैका अगाडि बाइकमा बसेर प्रेमीसँगै भागिन् बेहुली
अकस्मात धन लाभ हुनु अघि देखिन्छन् यस्ता सङ्केत, कतै तपाईले पनि देख्नुभएको छ की ?
गर्भवती भएको खबर सार्वजनिक भएसँगै अभिनेत्री आलिया भट्टलाई बधाई दिनेको ओइरो
बुबा ऋषी कपुरको फिल्म ‘प्रेम ग्रन्थ’मा छोरा रणबीरले पाएका थिए २५० रुपैयाँ पारिश्रमिक,आफ्नो पहिलो तलब असल छोरा बनेर आमाको चरणमा थिए चढाएका
छोरालाई अन्तिम पटक फोनमा यस्तो भनेकी रहेछिन दिल मायाले ( भिडियो हेर्नुहोस )
मृत भेटिएकी गायिका दिलमाया लिभिङ टुगेदर’मा रहेको रहस्य खुल्यो, यस अघि पनि गरेकी थिइन् आ त्मह त्याको प्रयास
असार १५ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
२०७९ जेष्ठ ८ गते आइतवार प्रकाशित
चितवनl भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा फेरि पनि रेणु दाहालको जित सुनिश्चित भएको छ। २८ हजार १९५ मत गन्न बाँकी छँदा पाँच दलीय गठबन्धनबाट मेयरकी उम्मेदवार माओवादी केन्द्रकी दाहालले ३९ हजार ४१६ मत प्राप्त गरेकी छन्।
दाहालका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले ३० हजार ६६० मत प्राप्त गरेका छन्। भरतपुरमा एक लाख २७ हजार ८३९ मत खसेकोमा हालसम्म ९९ हजार ६४४ मतगणना गरिएको छ।
वडा नम्बर ४ को मतगणना देखि नै लगातार अग्रता लिँदै आएकी दाहाल सुवेदीभन्दा आठ हजार ७५६ मतले अगाडि छन्। अहिले भरतपुर–२१ र २२ को मतगणना भइरहेको छ। दुवै वडामा गठबन्धनका उम्मेदवार अगाडि छन्। सात वटा वडाको पुरै मत गन्न बाँकी छ।
कुनै चमत्कार भएको अवस्थामा बाहेक सुवेदीले जित्ने सम्भावना देखिँदैन । एमालेका वडा अध्यक्षका उम्मेदवारले पाएको भोट एमालेकै मेयरका उम्मेदवार सुवेदीले पाएका छैनन्। एमालेको गढ मानिएको वडामा नै मेयरमा दाहाललाई दिएर बाँकी पदमा एमालेका उम्मेदवारलाई मत दिएको पाइएको छ।
कांग्रेसका बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलका कारण पनि रेणु दाहाललाई जित्न सहज भएको छ। पौडेलले अहिलेसम्म १२ हजार ८१० मत ल्याएका छन्। असन्तुष्ट कांग्रेसीबाट सुवेदीलाई जान सक्ने मत पौडेलले रोकेका छन्।
मेयरमा सुवेदीलाई दाहालले धेरै मतान्तरले पछाडि पारे पनि माओवादी केन्द्रले पाएको वडा अध्यक्ष पद जित्न सकेको छैन। २२ नम्बर वडाको मत गणना भइरहँदा माओवादीले एउटा मात्रै वडा जितेको छ।
उपमेयरमा गठबन्धनका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले ४१ हजार ६६७ मत ल्याएका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी राप्रपाकी हिमला गुरुङले २४ हजार २६७ मत ल्याएकी छन्।
आजको राशिफल : भाद्र ८ गते, सोमबार
काखीमुनि र आँखाको कालो हटाउने यस्ता छन् घरेलु उपाय